कुकुर बग आउट झोला: पूर्ण कुकुर सर्वाइभल इमर्जेन्सी किट - गुड एयर टीम द्वारा K9 मास्क
कुकुरहरूका लागि एयर फिल्टर मास्क · समुद्री हेरचाह · कुकुर आपातकालीन किट · कुकुर · स्वस्थ कुकुर · जनवरी 12, 2022
धेरैजसो मानिसहरू आपत्‌कालीन निकासीका लागि तयार हुन्छन्, तर जब हाम्रा घरपालुवा जनावरहरूको कुरा आउँछ तिनीहरूसँग पनि केही आवश्यकताहरू हुन्छन्। यही कारणले गर्दा यदि तपाईंसँग पारिवारिक घरपालुवा जनावर छ भने, तपाईंले एक सेटअप गर्नुपर्छ कुकुर अस्तित्व किट अत्यावश्यक चीजहरू जसले तिनीहरूलाई मद्दत गर्नेछ, साथै तपाईंलाई संकटमा बग आउट गर्न आवश्यक पर्दा मद्दत गर्दछ।
पहिले आफ्नो बग आउट योजना बनाउनुहोस्
आफ्नो आफ्नै सुनिश्चित गर्नुहोस् आपतकालीन निकासी योजना तपाईंले आफ्नो कुकुरलाई यसमा समावेश गर्न सुरु गर्नु अघि ढुङ्गामा सेट गरिएको छ। मलाई थाहा छ यो क्रूर सुनिन्छ, तर चीजहरू हुन्छन्, र तपाईंले आफ्नो कुकुरलाई त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ (वा तपाईंको कुकुरले तपाईंलाई छोड्न सक्छ!)
संगत - यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईं एक्लै बग गर्दै हुनुहुन्छ। पारिवारिक घरपालुवा जनावर पनि साना बच्चाहरूसँग बग्दा तनाव कम गर्नमा उत्कृष्ट हुन सक्छ।
गर्मी - तपाईं आफ्नो कुकुर संग न्यानो सुत्न को लागी अँगालो गर्न सक्नुहुन्छ।
सुरक्षा - प्रशिक्षित कुकुरहरूले तपाईंलाई जंगली जनावर वा आक्रमणकारीहरू जस्ता खतराहरूबाट जोगाउन सक्छन्।
अतिरिक्त आपूर्तिहरू - यो सम्भव छ कि तपाईंले आफ्नो कुकुरको केही आपूर्तिहरू बोक्नुहुन्छ, जसको मतलब अतिरिक्त वजन हो।
सुरक्षा - जब कुकुरले केही सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ, भुक्ने कुकुरले पनि तपाईंको स्थान दिन सक्छ।
खुवाउनको लागि थप मुख - दीर्घकालीन बगिङको लागि योजना बनाउँदा, यसको अर्थ कुकुरहरूका लागि कुन जंगली खानेकुरा सुरक्षित छन् भन्ने बारेमा धेरै तौल वा तालिम लिन सकिन्छ।
जिम्मेवारी - कुकुरहरूलाई घरपालुवा गरिएको छ। खतरनाक इलाका मार्फत लामो यात्रा तपाईंको कुकुरलाई गाह्रो हुन गइरहेको छ, र तपाईं यो सबै मार्फत आफ्नो कुकुरको कल्याणको लागि जिम्मेवार हुनुहुनेछ।
गति - अधिकांश कुकुरहरू दिनभर सुत्न सन्तुष्ट हुन्छन्। तपाईंको कुकुरलाई सुरक्षामा बगाउँदा तीव्र गतिमा राख्नको लागि यो चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
तपाईंको कुकुरलाई बग आउटको लागि कन्डिसन गर्दै
तपाईंको कुकुरसँग धेरै ऊर्जा छ जस्तो लाग्न सक्छ। यद्यपि, कुकुरहरू घरपालुवा हुन्छन् र सामान्यतया लामो दूरी वा दुर्गम इलाकाहरू पदयात्रा गर्न उपयुक्त हुँदैनन्। हामीजस्तै तिनीहरूको शक्ति र सहनशीलता समयको साथ निर्माण गर्न आवश्यक छ।
अब कन्डिसन सुरु गर्नुहोस्: यसलाई तपाइँको विपद् तयारी योजनाको भाग बनाउँदै।
बिस्तारै आफ्नो हिड्ने लम्बाइ बढाउनुहोस्: यो राम्रो छ शारीरिक तयारी तिम्रो लागि पनि।
तपाईंको कुकुरमा खाली काठी झोला राख्नुहोस्: आफ्नो कुकुरलाई प्याक लगाउने बानी बसाल्नुहोस्। समयको साथ, बिस्तारै प्याकमा केही तौल थप्नुहोस् जबसम्म तपाईं अधिकतम वजनमा पुग्नुहुन्न।
तपाईंको कुकुरसँग रातभरि क्याम्पिङ यात्राहरूमा जानुहोस्: यसले तपाइँको कुकुरलाई घरबाट टाढा र पाल वा टार्प मुनि सुत्ने बानी पार्नेछ।
अफ-लीस प्रशिक्षण सुधार गर्नुहोस्: तपाइँले तपाइँको कुकुरलाई हिल र बोलाउँदा आउनेछ भनेर सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
कुकुर बग झोला
The 'कुकुर बग झोला' तपाईंको कुकुरको लागि बनाइएको एउटा साधारण किट हो ताकि तपाईं बग आउट हुँदा, बाँच्नको स्थितिमा हुनुहुन्छ, वा तपाईं पैदल यात्राको लागि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईंको वफादार साथीले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ र तिनीहरूको आफ्नै किट बोक्न सक्ने क्षमता हुन्छ।
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन तपाईंसँग तपाईंको कुकुर हुनु भनेको जंगलमा तपाईंको बाँच्नको लागि ठूलो थप हो र कारणहरूको सूचीको शीर्षमा यो हो कि थोरै तालिमको साथमा औसत कुकुरले तपाईंको बाँच्नलाई द्रुत रूपमा बढाउँछ। कुकुरहरू पनि सुरक्षाको सर्वोपरि मोड हुन्। तिनीहरूको एक्लै उपस्थिति सम्भावित घुसपैठकर्ताहरू, आक्रमणकारीहरू, र जंगली जनावरहरूलाई रोक्न पर्याप्त छ र तिनीहरू तपाईंसँग हुन सक्ने सबैभन्दा राम्रो प्रारम्भिक चेतावनी यन्त्र प्रणालीहरू हुन्। तिनीहरूको आवाज, गन्ध र दृष्टिको भावनाले कुनै पनि मानिसले गर्ने भन्दा धेरै पहिले अलार्म सेट गर्नेछ।
तपाइँको कुकुर अस्तित्व किट को लागी प्रयोग गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो झोला
जब तपाइँ पहिलो पटक कुकुर आउट झोला कसरी र के हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँको पहिलो विचार तपाइँको आकार को बारे मा हुनुपर्छ कुकुर र यो कस्तो आकार बोक्न सक्छ। आदर्श रूपमा, तपाईं आफ्नो कुकुरलाई तौल गर्न वा असुविधाजनक झोला दिन चाहनुहुन्न। तपाईंको कुकुरलाई कुकुरको प्याक प्रयोग गरेर सहज बनाउनको लागि एउटा उत्तम तरिका भनेको यसलाई खाली राखेर सुरु गर्नु हो, र त्यसपछि बिस्तारै तौल थप्नुहोस् जसरी तिनीहरूले बानी पर्छन्।
प्याकको लागि, मैले प्रयोग गर्ने एउटा, र धेरै अन्य मालिकहरू, एक हो माउन्टेनस्मिथ K-9 डग प्याक। यसले राम्रो फिट दिन्छ र कुकुरलाई समायोज्य छ ताकि जब तिनीहरू वरिपरि दौडिरहेका हुन्छन्, हाम फाल्ने वा बिछ्याउँछन्, यो एकतर्फी वा झर्ने छैन।
रंगहरूको दायराको कारण, केही मालिकहरू थप क्यामफ्लाज प्रकारको प्याक प्रयोग गर्न चाहन्छन् जुन माउन्टेनस्मिथ ब्रान्डहरूको लागि उपलब्ध छैन। यदि तपाइँ यस्तै केहि पछि हुनुहुन्छ भने, हेर्नुहोस्aOneTigris डग प्याक जसमा वैकल्पिक रंगहरूको दायरा छ।
तपाईको कुकुरले प्याकमा के बोक्नुपर्छ
त्यसोभए तपाईले के राख्नुहुन्छ तपाईंको कुकुर अस्तित्व किट? जब तपाइँ कुकुर बग आउट झोला प्याक गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ कुकुर बिस्कुट भन्दा बढी छ।
कुकुर बाँच्ने खाना
खानाको कुरा आउँदा सोच्ने पहिलो कुरा यो हो कि तपाईंको कुकुरले व्यवहार गर्छ वा शिकारमा आधारित। यदि यो शिकारमा आधारित छ भने, यो आफ्नै खानाको लागि शिकार गर्न सक्षम हुन सक्छ। यो धेरै हदसम्म तपाईले बस्नुभएको क्षेत्रमा निर्भर गर्दछ, किनकि केहि क्षेत्रहरूमा अरू भन्दा कुकुरहरूको लागि सानो शिकार हुन सक्छ। जे भए पनि त्यो मामला हुन सक्छ, तपाइँ तपाइँको कुकुरको लागि केहि अतिरिक्त खाना भएको हेर्न चाहानुहुन्छ। यदि यो उपचारमा आधारित छ भने, त्यहाँ एक राम्रो मौका छ कि यो सबै शिकार गर्न गइरहेको छैन। सुरक्षित राख्नको लागि, यो एकदम हल्का भएकोले सकेसम्म धेरै खाना लिनु राम्रो हुन्छ।
खानाको लागि, तपाईं पानी संग मिसाउन सक्षम सुक्खा कुकुर खाना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ यसलाई धेरै पाल्तु खाना पसल वा अनलाइन मा पाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईं तिनीहरूको सामान्य सुख्खा खाना प्रयोग गर्न पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यो अझै धेरै हल्का छ।
संकुचित कुकुर कचौरा
तपाइँ स्पष्ट रूपमा तपाइँको कुकुरको अस्तित्व किट ओभरप्याक गर्न चाहनुहुन्न त्यसैले तपाइँ कम्प्याक्ट वस्तुहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ जुन तिनीहरूले गर्न सक्छन्। बोक्ने। पैदल यात्रा वा शिविरको समयमा, दुई लिनुहोस् कोलेप्सिबल कुकुरको कचौरा, एउटा पानीको लागि, र एउटा तपाईंको घरपालुवा जनावरको खानाको लागि।
यो कुकुरको झोलाको लागि ठूलो स्पेस सेभर हो किनकि तपाईंको प्राथमिक फोकस स्पेस व्यवस्थापनमा छ ताकि तपाईंको कुकुरलाई ठूलो झोला नदिनुहोस्।
तपाईंको कुकुर अस्तित्व किटको लागि मेडिकल गियर
पहिले, यदि तपाइँको कुकुर कुनै उपचार वा नियमित चक्कीहरूमा छ भने, तपाइँ यसलाई उनीहरूको सानो मेडिकल किटमा समावेश गर्न चाहानुहुन्छ। नियमित थप्नको लागि, मैले एउटा थपे कुकुरहरूको रूपमा इजरायली पट्टी सामान्यतया तपाईंले तिनीहरूलाई बेर्नु भएको कुनै पनि चीजलाई छाड्न राम्रो हुन्छ। यदि त्यहाँ घाउ छ भने, तिनीहरूको प्रतिक्रिया यसलाई चाट्ने प्रयास गर्ने हो, त्यसैले यो जस्तै केहि यसलाई ठाउँमा राख्छ। तपाईं टाइट-रेप जस्ता चीजहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ACE ब्यान्डेजहरू जुन समान प्रभावमा काम गर्दछ।
त्यहाँ अन्य चीजहरू छन् जुन राख्नको लागि राम्रो विचार हुन सक्छ, जस्तै:
तपाईंको कुकुर आउट झोलाको लागि अतिरिक्त
तपाइँ तपाइँको झोला को एक भाग मा राख्न को लागी विचार गर्न को लागी केहि अन्य चीजहरु हो:
दर्ता र खोप रेकर्ड जस्ता रेकर्ड र कागजातहरूको प्रतिलिपिहरू
तपाईंको नाम, नम्बर र यसमा कुकुरको नाम भएको कार्ड (यो कलरमा पनि हुनुपर्छ)
एक पट्टा (यदि तपाईंले पहिले नै प्रयोग गरिरहनुभएको छैन भने)
एउटा खेलौना जुन कुकुरसँग परिचित हुन सक्छ
K9 Mask® राम्रो एयर टीम द्वारा: कुकुरहरूको लागि डिजाइन गरिएको एयर फिल्टर मास्क
तपाइँको कुकुरको जीवन रक्षा किट विश्वको अन्त्यको झोला मात्र होइन, तपाइँ बाहिर, पैदल यात्रा, वा शिविरमा जाँदा तपाइँको सबैभन्दा मिल्ने साथीलाई उनीहरूलाई चाहिने कुरा बोक्न प्रयोग गर्ने यो एउटा सरल समाधान हो।